Kupisa kupisa matambudziko mune mamwe Apple Tarisa SE | Ndinobva mac
Nyaya dzinopisa pane mamwe maApple Watch SEs
Vashandisi vakati wandei vari kuratidza mifananidzo maunogona kuona gwapa pachiratidziro cheApple yako Watch SE inonzi inogadzirwa nekupisa kwakanyanya. Iri dambudziko vanogovana pane iro peji MacRumors webhusaiti uye dzimwe nzira dzinozivikanwa, tiratidze dambudziko rakakura mumidziyo iyi.
Zvinotaridza kuti matambudziko anokanganisa batch yeApple Watch SE iri muSouth Korea uye yeyero nzvimbo inogona kugadzirwa nekupisa kwakanyanya. Mumwe weavo vakakanganiswa anotsanangura izvozvo Akarara neApple Watch uye kuti akacherechedza paakamuka ruoko rwakadziya, akabva abvisa wachi ndokuenda nayo kuchitoro uko kwaakazowana chinotsiviwa.
Mifananidzo yatinayo muchinyorwa iri kujekesa dambudziko iri iro hatisati tamboona paApple wachi:
Kune rimwe divi zvinoita sekunge dambudziko iri chete Iyo inokanganisa iyo Apple Tarisa SE uye batch kubva kuSouth Korea. Uye haisiyo nyaya hombe sezvo pasina zvichemo pamusoro pazvo, zvinoitika ndezvekuti kana chinhu chakadai chikaitika isu tese tinozviziva uye nekuwedzera kana tine modhi senge yakatsanangurwa.
Chero zvazvingaitika, Apple yatove nechave dhizaini yakabatwa nedambudziko rekupisa iri mumawoko aro uye iri kushanda kuti iwane dambudziko, dambudziko rinoratidzika kunge rakanangana uye pasina mamiriro akajairwa. Tichaona zvinotsanangurwa neApple kana ikatsanangura chimwe chinhu sezvo mune izvi zviitiko chete chinhu chavanoita kudzivirira kuti zvisaitike mune mamwe mamodheru uye mune vamwe vanopa muripo kune mushandisi akabatwa nekukuvara kwega kana aripo. Tichaona nekufamba kwenguva kana tiine mamwe makesi kana ichirambira mune chimwe chinhu chakanangana
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Nyaya dzinopisa pane mamwe maApple Watch SEs
Isu takaedza iyo Reolink Argus PT yekuongorora kamera